ANJAN DTS 10 Digital FM / AM / Shortwave / SSB World Band Radio Receiver English manual - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Supplier China Kpọtụrụ: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
home » ANJAN DTS 10 Digital FM / AM / Shortwave / SSB World Band Radio Receiver English manual
Akwụkwọ ntuziaka Bekeedownload
Tune: Ngbanye Digital
Batrị: 4x R20
Ndị otu: Abụọ
Ọwa Soundda: Egwu
aro: 1.82kg (anaghị etinye batrị)
Okwu mkparita uka
Anyị nwere onye ahịa Holand bụ onye zụrụ onye na-anabata ihe a .Anyị na-ekele ya nke hụrụ ọrụ ahụ:
Jikọọ ihe ntụgharị decoder ka ịgbanwee akara dị ka CW na RTTY
(2) Stationlọ Ọrụ Redio Redio: 1000
(3) Nnukwu Mmachi:
(4) Họrọ Nhọrọ Nke Otu: Sing 5k> 30dB
(5) ike mpụga
mpụga DC inye ọkụ: 6v
ihe ngosi ike nke AC: ~ 220v 50Hz
(6) Ọkà okwu: D128mm 8 5w
(7) Isi okwu: D3.5mm 32;
Anyị ga-eji ya kpuchie ya nkwakọ ngwaahịa ikuku si na-ezere ihe na-adịghị mma
ANJAN DTS 10 onye na-anabata ya
Akwụkwọ ntuziaka Bekee
I nwekwara ike ịga websaịtị a: http://groups.yahoo.com/group/AnjanDTS10/
Anyị nwere onye ahịa si Netherlands. Ọ zụtara onye na-anabata ANJAN STS 10 ma afọ juru ya nyochaa maka nke a. N'okpuru bụ nyocha:
Nyochaa Anjan DTS-10
Ihe nnabata a abịala ebe a, ngwugwu siri ike, gụnyere eriri maka 220 V, zoro ezo na batrị. Enweghị batrị gụnyere, ị ga-eji 4 x R20, nnukwu nha.
Ejiri mpempe akwụkwọ foil kpuchitere ihe ngosi ahụ. Echiche mbu m bụ, nke a bụ redio ojii siri ike, ihe ziri ezi, ezigbo mma na igodo, ngosipụta doro anya, nnukwu telescopa eri wdg Onye na-anabata obere mana m ga-eji ya dịka onye nnata desktọọpụ.
Na ngosi ị ga - ahụ
- ngosipụta mono / stereo,
- Itu onu / sara mbara,
- SSB egosi,
- Ngosi ike nke mgbaàmà ọdụ, (0 maka mgbama na-adịghị ike na 6 maka mgbaama siri ike)
- Oge ngosi na nchekwa (mgbe ike: ọ na - egosi oge na ozi nchekwa),
- A ga-egosipụta ogo okpomoku na mita (mgbe ọzụrụ obere oge, gosiputa mmachi mita nke
ugboro; Gosiputa onodu ikuku di ugbua n’ime ihe ozo.
- Isi gosipụta ya (mgbe agbanyụrị, ị na-ahụ elekere, mgbe ike dị na: na-egosi aha ọdụ,
ugboro, njehie arụ ọrụ wdg.
- Tune ngwa ngwa na ngwa ngwa egosi
- Mkpọchi mkpọchi (ọtụtụ maara ọrụ) egosi
- AM Frequecy, iche iche (KHZ)
- mgbanwe mgbanwe ugboro ugboro (MHZ)
- Ngụ oge-1, 2, 3
- Ihe ngosiputa ihe ngbanye ike
- Ihe ngosi batrị
- Nchekwa onwe-apụ apụ
- Ihe ngosi wave
Na ngosipụta nke abụọ, ị ga-ahụ mgbe ike gbanyụrụ n’oge elekere nke abụọ
Mgbe ike dị, ị ga-ahụ ugboro ole. Yabụ ọ bụrụ na ịnwere aha ebe ọdụ, ị ka ga-ahụ ugboro ugboro na ngosipụta nke abụọ a
Na n'ihu bọtịnụ maka
PRETA (igodo chọgharịa, ma ọ bụrụ na ị pịa dị mkpirikpi: nyocha nlele nyocha ma ọ bụ chọọ ọwa ikuku
ATS (Ogologo pịa: ụgbọ inyocha & ncheta ụgbọ ala)
PAGE (obere pịa: tụgharịa peeji
MEMO (obere mkpirisi: Ebe a na-echekwa
M / F (obere mkpirisi: Gbanwee ọnọdụ ụda ọkụ na ọwa ọkụ ọnọdụ mode
SLEEP (ike na: pịa pịa: Gbanyụọ / gbanyụọ igwe elekere elekere
SSB (gbanye / gbanyụọ) SSB ịnata
MB / ST (Mita otu / stereo, obere mkpirisi: Họrọ stereo ma ọ bụ igwe ịgbanwee mita
AKPỌ igodo ekwentị, obere pịa: Gbanwee ugboro ole ọ ga-aga ma ọ bụ ọwa
EDIT (aha ụgbọ ala ahaziri) mkpụrụedemede mkpụrụedemede alfa
Bọtị agbanweta abụọ, maka Wide na Narrow, nke ọzọ maka FM, SW, MW, LW
Igwe mara mma dị mma maka ntinye ugboro, ọ dịghị mkpa ịnye Enter..so, 6.075 bụ 6 0 7 5
Mgbe ahụ, a na-akụ maka AM AGG + - SSB mma - Treble na Bass
Ha niile na-arụ ọrụ nke ọma!
N'elu aka nri n'anya onye nata, enwere otutu ihe a na-eme, maka idozi ntuziaka, kamakwa maka idebe oge, Osote abia wdg dịka ọmụmaatụ iji ya na ihe nrụpụta ihe.
Telescope ahụ dị ogologo ma dịkwa n'elu onye na-anabata ya ị ga - achọta bọtịnụ ọkụ na Mbọchi (Mute) .. Iji buru onye nata ya, enwere njiri siri ike.
Na akụkụ aka ekpe enwere akara na njikọ isi. Ọzọkwa ị ga-ahụ njikọ DC 6 Volt.
Na azụ njikọ AC AC 220V na njikọ antenna, 75 ohm na ogologo antenna .. E nwekwara njikọ “Ground” (GND).
N'ikuku: Ezigbo arụmọrụ n'ere niile. Ọgha ma doo anya. Ọzọkwa Treble na bass bara ezigbo uru. Mgbe m gere nti na hams, enwechaghi m Bass na treble. Maka egwu Bass mara ezigbo mma.
Eningge ntị na ụtarị dị mma. Mana ejikọtara m ogologo waya 20 mita na osisi n’ubi m.
SSB dịkwa mma nke ukwuu! Igwe mara mma na-arụ ọrụ dị mma, dịkwa mfe nghọta. M na-arụ ọrụ ebe a na MTC 029 morse RTTY, TOR wdg, na-ejikọ na ngwa ọdịyo dị n'aka nri.
Anjan na-enyepụta ezigbo ihe iji mepụta akara ndị ahụ. Ya mere enwere m ike ịma dịka ọmụmaatụ Morse (CW) na 7.010 na ugboro ugboro. Ọmarịcha mgbakwunye ahụ Audio jaak!
Njirimara mara mma bụkwa nhọrọ iji jiri ihe ncheta 1000 ahụ nwere aha Station!
Ibe 10 nke ncheta 100 ị nwere ike iji nyocha.
Ngosipụta ahụ dị mma ịgụ, ịrụ ọrụ n'abalị bụkwa ihe ụtọ na ihuenyo nwere bọtịnụ.
Ọnụahịa ahụ bụ ugbu a (29/6) $ 130, - echekwa m na nke a bụ ọnụahịa ezi uche maka ihe ị nwetara. N’ezie igwe ga-adị ọfụma, ma enwere m afọ ojuju na redio a mara mma.
Ogologo oge (ogologo) mkpuchi nnyefe ahụ?
Mgbasa nnyefe na-adabere n'ọtụtụ ihe. Ezi anya sitere na mmetụta nke nnata, mpako nke nnata, yana ụlọ na mgbochi ndị ọzọ, nke dị n’etiti onye na-ebugharị ya na onye na-anabata ya. Na anya ga-ọtụtụ ihe n'ime obodo.
Enwere m onye ahịa USA na-eji 5W fm transpila nwere GP GP n'obodo ya, ọ na-eji ụgbọ ala nwalee ya, ọ kpuchie 10km (6.21mile).
M na-anwale eriri 5W fm jiri antenna GP n'obodo m, ọ kpuchie ihe dị ka 2km (1.24mile).
M na-anwale nnyefe 5W fm na eriali GP na Guangzhou obodo, ọ kpuchie ihe dịka 300meter (984ft).